ဧရာညီနောင်: Windows7Electric Blue Ultimate 32/64-bit 2011/ENG -Final
Windows7Electric Blue Ultimate 32/64-bit 2011/ENG -Final
ပထမ Window7တစ်ခွေတင်ပေးထားတာလင့်ခ်သေသွားတာ နဲ့ အခုနောက်ထပ် တစ်ခွေပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်နော် အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ.....း)
Post installer now allows you to choose apps
All apps are silently installed..
Printer Support is now complete.
Now has Office 2010
Languages (English only)
Post Installer Apps:
Office 2010 Professional Plus Vol Lic
Everything (file searcher)
အပိုင်း (1) ၊ အပိုင်း (2) ၊ အပိုင်း (3) ၊ အပိုင်း (4) ၊ အပိုင်း (5) ၊
အပိုင်း (6) ၊ အပိုင်း (7) ၊ အပိုင်း (8) ၊ အပိုင်း (9) ၊ အပိုင်း (10) ၊
အပိုင်း (11) ၊ အပိုင်း (12) ၊ အပိုင်း (13) ၊ အပိုင်း (14) ၊ အပိုင်း (15)
Posted by ဧရာညီနောင် at 2:31 PM